Haween u xiran Kurdiyiinta Suuriya Oo Dhibaato Adag la kulmaya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Haween u xiran Kurdiyiinta Suuriya Oo Dhibaato Adag la kulmaya.
On Sep 16, 2020 362 0
Dhibaatooyin ba’an iyo nolol xumo ayaa ka jirta kaam weyn oo ku yaala gobolka Al-Xasaka ee dalka Suuriya, halkaas oo ay maamulaan malleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ka amar qaata dowladda Maraykanka.
Kumanaan ruux oo isuga jira haween iyo caruur ayaa lagu hayaa kaamamkaas, isagoo lagu tilmaami karo inuu yahay xabsi weyn oo dusha sare kafuran, dadkana looma ogola iney halkaas ka baxaan.
Cuntada iyo biyaha ayaa aad u liita, waxaana haweenka muslimaadka ah ee lagu hayo kaamkaas ay ku noolyihiin xaalad adag, iyagoo tacadiyaad kala duwan kala kulma malleesiyaadka Kurdiyiinta ee leh dhaqanka Ameerikaanka.
Dhawaan tiro dumar ah oo wata caruur yar yar oo ay dhaleen ayaa qaaday tallaabo ay ku doonayeen iney kaga baxsadaan kaamkaas xabsiga ah, iyagoo isku qariyay booyado waweyn oo ka baxayay kaamka.
Booyadaha ayaa xilli ay marayeen mid kamid ah kontoroollada malleeshiyaadka Kurdiyiinta waxay la kulmeen baaritaanno adag, taaso keentay iney fashilmaan haweenkii iyo caruurtooda ku baxsayay booyadaha dhexdood.
Muuqaallo lagu baahiyay Internetka ayaa muujinaya iyadoo haweenka muslimaadka ah iyo caruurtooda laga soo saarayo booyadaha, halka caruurto uu naqaska ku dhegay, sababo ku aadna Oxygeyn la’aan.
Isku dayada ay haweenkan ku doonayaan iney kaga soo baxaan xabsiga Al-howl ee ay Kurdiyiinta ku tilmaamaan inuu yahay kaam ayaa ah kuwa halis badan, waxaana ay ku waayaan noloshooda, iyadoo xitaa looga qaato lacago kumanaan dollar ah.
Haweenka Muslimaadka ah ee ku xiran halkaas ayaa ah gabdhaha muhaajiraad ah oo intooda badan kasoo jeeda wadamada caalamka Islaamka iyo xitaa wadamada reer galbeedka.
Axmad 3954 posts 8 comments
Teleefannada Diblumaasiyiin Maraykan ah Oo la Jabsaday. (Dhagayso)
Ordogan Oo ka badbaaday Isku day lagu doonayay in Lagu Dilo.
Axmad	 Dec 5, 2021 0
Jijeelle iyo Makanne oo Diyo ku kala qaatay Wilaayada Hiiraan.…